Haween banaanbax ka dhigay Togo - BBC News Somali
Haween banaanbax ka dhigay Togo
21 Jannaayo 2018
Image caption Dumarka banaanbaxayey waxay ku labisnaayeen dhar madow
Tobannaan kun oo ah haween oo intooda badan ku labisan dhar madow ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalooyinka Togo, laga soo bilaabo magaalada caasimadda ah ee Lome ee ku taalla koonfurta, ilaa laga yimaado waqooyiga oo ah meesha uu ku xooggan yahay madaxweynaha.
Waa dibadbaxii ugu dambeeyay mudaharaadyo muddo bilooyin ah soconayay oo dadka qaar ay tirada ka qeybqaadanaysa ku sheegeen inay gaarayso boqollaal kun oo qof, weliba dal yar oo dadkiisuna ay yihiin 6.5 milyan oo qof.
Dibadbaxayaasha mucaaradka ayaa la dilay, qaarna waa la dhaawacay halka kuwa kalana xabsiga loo taxaabay.
Guryaha dadka taageera dowladda ayaa la gubay ilaa dhulka lala simay.
Diiradda carada taagan ayaa waxa ay ku wajahan tahay Madaxweyne Faure Gnassingbe, kaas oo xilka hayay tan iyo 2005-tii markaas oo uu xilka kala wareegay aabihii, Gnassingbe Eyadema, kaasoo isna xilka 1967 kula wareegay afgambi, todoba sanno un ka dib markii waddankaasi uu xorriyadda ka qaatay waddanka Faransiiska.
Mucaaradka ayaa doonaya in muddo xileedka madaxweynaha lagu soo koobo laba jeer oo kaliya, iyo in madaxweynaha haatan xilka haya uusan mar kale u tartamin xilka marka la gaaro doorashada 2020-ka. Qaarna waxa ayba doonayaan in haddaba uu xilka banneeyo.
Hase yeeshee Mr Gnassingbe ayaanan muujin wax calaamad ah oo uu xilka ku bannaynayo, iyadoo tallaabada uu baarlamaanka ku doonayo inuu ku badelo dastuurka ay mucaaradka u arkaan inay tahay khiyaano lagu doonayo inuu awoodda ku sii hayo in ka badan 20 sanno.